Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Mpizahatany mankany Hawaii: Tianay ny tsy hahita anao bebe kokoa
Vaovao Mafana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Novokarin'ny mponina ao Oahu, ary niara-niasa tamin'ny City sy County of Honolulu sy ny Birao Mpitsidika ao Oahu (OVB), ny Plan Destiny Management Destination (DMAP) ao Oahu dia mamaritra ny faritra ilaina ary koa ny vahaolana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny mponina fiainana sy fanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika. Ny laharana voalohany amin'ny drafitra dia ny fampihenana ny isan'ireo mpitsidika. Ny fizahantany no mpamily toekarena lehibe indrindra any Hawaii ary miparitaka amin'ny indostria hafa toa ny serivisy, ny fitaterana ary ny fivarotana antsinjarany.
Nangonina nandritra ny fampisehoana virtoaly roa ary koa ny endrika fampidirana an-tserasera ny tamberim-piarahamonina.
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny DMAP 2021-2024, torolàlana hanarenana, hamaritana ary hamerenana ny làlan'ny fizahan-tany any Oahu.
Ny drafitra miorina amin'ny fiarahamonina dia ampahany amin'ny asan'ny HTA mankany amin'ny Malama Kuu Home (mikarakara ny tranoko malalako) sy ny ezaka haingana vitany hitantanana ny fizahantany amin'ny fomba fanavaozana.
"Mankasitraka ireo mponina ao Oahu izay nandray anjara tamin'ny fizotran'ny DMAP izahay ary nanolotra tamim-pitiavana ny fomba fijerin'izy ireo isan-karazany, niady hevitra momba ireo fanamby mifandraika amin'ny fizahan-tany ao amin'ny faritra misy azy ireo ary nanampy tamin'ny famolavolana drafitra azo tanterahina izay ilaina amin'ny fiadanan'ny fiarahamonina," hoy i John De Fries , Filohan'ny tale jeneralin'ny HTA. "Ny momba ny fiaraha-miasa mitohy sy ny fandrosoana hiaraka hanaja ity toerana tiana ity sy ny tsirairay, araka ny fanirian'ireo mponina ao Oahu."
Ny DMAP dia mifantoka amin'ny hetsika lehibe izay heverin'ny fiarahamonina, ny indostrian'ny mpitsidika ary ny sehatra hafa fa ilaina mandritra ny telo taona. Ny fototry ny Oahu DMAP dia miorina amin'ny Drafitra stratejika HTA's 2020-2025, ary ny fihetsika dia mifototra amin'ny andry efatra mifandraika - Harena voajanahary, kolontsaina Hawaii, fiarahamonina ary fivarotana marika.
“I Oahu dia toerana manokana ary miavaka amin'ny toerana hafa rehetra manerantany noho ny hatsarany voajanahary sy ireo olona mahatalanjona ao aminy. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anao hikarakara ny loharanonay dia mamorona tontolo iray ahafahan'ny kolontsainay, ny tany sy ny rano ary ny toekarentsika ary ny fifandraisanay hiroborobo ”, hoy ny Ben'ny tanàna Rick Blangiardi.
Notohizany hoe: "Miara-miasa amin'ny laharam-pahamehana miorina amin'ny fiarahamonina telo ny City sy County of Honolulu ny fiaraha-miasa amin'ny Fahefana fizahan-tany Hawaii momba ny drafitra fitantanan-jaza Destiny ao Oahu: Arovy ireo tranokalanay malaza indrindra ary tantano ny traikefa ho an'izay mitsidika azy ireo, ferana fohy -Manofa trano hialana amin'ny faritra zona, ary hampitombo ny fampiasana ny safidy fitaterana maharitra mifandraika amin'ny mpitsidika. ”
Ireto hetsika manaraka ireto dia novolavolain'ny komity mpitantana ao Oahu, misy ny mponina misolo tena ireo vondrom-piarahamonina onenan'izy ireo, ary koa ny indostrian'ny mpitsidika, sehatra fandraharahana samihafa, ary fikambanana tsy mitady tombombarotra, miaraka amin'ny fidiran'ny fiarahamonina. Ny solontena avy ao amin'ny Tanàna sy County of Honolulu, HTA ary OVB dia nanome ny heviny ihany koa nandritra ny fizotrany.
Ahenao ny isan'ny mpitsidika any Oahu amin'ny ambaratonga azo tantanana amin'ny alàlan'ny fifehezana ny isan'ny trano fandraisan'ny mpitsidika sy ny fikarohana ny fanovana ny fampiasana ny tany, ny zoning ary ny politikam-piaramanidina.
Mampihatra programa fifandraisana sy fizahan-tany mialoha sy aorian'ny fahatongavana mba hamporisihana ny fihetsika manaja sy manohana.
Fantaro ireo tranonkala ary ampiharo ny drafitra fitantanana amin'ny toerana mafana indrindra ao Oahu.
Ampitomboy ny fampiharana sy fitantanana mavitrika ireo tranokala sy lalan-kely.
Mamolavola rafitra famandrihana hanaraha-maso sy hitantanana ireo mpampiasa amin'ny tranokala voajanahary sy tranokala.
Mametraha “Saram-pizahan-tany regenerative” izay manohana mivantana ireo programa hamerenana amin'ny laoniny ny loharanon-karen'i Hawaii, hiaro ny harena voajanahary ary hiatrehana ny trosan'ny fitehirizana tsy voavidim-bola.
Mamolavola sy mampihatra programa marketing mba hisarihana ireo mpandeha misy fiantraikany tsara izay manao laharam-pahamehana ny tontolo iainana, ny kolontsaina ary ny fampiasam-bola amin'ny vondrom-piarahamonintsika eo an-toerana.
Tohizo ny famolavolana sy fampiharana ny programa "Buy Local" mba hampiroboroboana ny fividianana vokatra sy serivisy eo an-toerana hitazomana vola ao amin'ny vondrom-piarahamoninay ary hampihena ny dian-tongan'ny karbaona.
Tantano ny fampiasan'ny mpitsidika fiara amin'ny alàlan'ny fitaterana any Oahu.
Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-monina mba hampivelatra, hivarotra, hamporisika ary hanohana traikefa iaraha-miasa sy voarindra izay mampanan-karena ny mponina sy ny mpitsidika.
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 36